Return of MMgenius by Blackdream – Giant's Web
© 2016. Powered by WordPress. Created by Zox Zin Min	Return of MMgenius by Blackdream
ကျွန်တော်အရင်ဆုံး မင်္ဂလာရှိတဲ့သတင်းတစ်ခုကိုပြောချင်ပါတယ်..။ အဲ့ဒါကတော့ ကျွန်တော်တို့ ညီအစ်ကိုတွေ စုပေါင်းပြီးတည်ထောင်ထားတဲ့ MMGenius Blog Service အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ ISP ကလူတွေကတော့ ဘယ်လိုတွေ သဘောရပြီး အမြင်မကြည်လင်တာတွေ ရှိလို့ Ban လိုက်တယ်တော့မသိဘူး..။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၄ လကျော်လောက်က ကျွန်တော့်ရဲ့ www.blackdream21.com အပါအ၀င် www.mmgenius.com ပါ အ Ban ခံလိုက်ရပါတယ်..။ ဒါနဲ့ပဲ ကျွန်တော်တို့ အရင်ကထားခဲ့တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေ အားလုံးသဲထဲရေသွန်သလိုဖြစ်ပြီး တော်တော်လေး စိတ်ဓာတ်ကျသွားခဲ့ကြပါတယ်…။
ဒါပေမယ့် တစ်နေ့မှာ ကျွန်တော် ဘလော့တွေကို လိုက်ဖတ်ကြည့်ရင်း Backup လုပ်ထားလို့ကျန်ခဲ့ တဲ့ www.mmgenius.com နဲ့ရေးနေကြတဲ့ Zox ရဲ့ Post နှစ်ခုကို ဆက်တိုက်ဖတ်လိုက်မိပါတယ်..။ အဲ့ဒီ့မှာ ကျွန်တော်တို့ MMGenius ကပေးထားတဲ့ ၀န်ဆောင်မှုကို သစ္စာရှိရှိနဲ့ တစ်စိုက်မတ်မတ် ဆက်လက် အသုံးပြုကာရေးနေကြတဲ့ ညီအစ်ကိုမောင်နှစ်မတွေရဲ့ ဆန္ဒတွေနဲ့ ရင်ထဲက ခံစားချက်တွေကို ကျွန်တော် ဖတ်မိလိုက်ပါတယ်..။ ကျွန်တော် တကယ်ပဲ စိတ်မကောင်း ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်..။ စိတ်ပျက် လက်ပျက် ဖြစ်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ စိတ်တွေလည်း တစ်ခါ ခေါင်းပြန်ထောင်လာပါတယ်…။ နားလည်မှု မရှိတဲ့ လူအချို့ကြောင့် တကယ် တစ်စိုက်မတ်မတ် အသုံးပြုနေတဲ့သူတွေ..။ သုံးချင်တဲ့သူတွေရဲ့ အကျိုးတွေ ကျွန်တော့်ရဲ့ ပျော့ညံ့မှုကြောင့် ပျက်ဆီးကုန်တယ်လို့ ကျွန်တော်ခံစားလိုက်ရပါတယ်..။
← ဂျီတော့ခ် မနျူရယ်လ်အသိတရား →
One comment on “Return of MMgenius by Blackdream”	မောင်မိုး says:	March 15, 2010 at 1:34 pm	မြန်မာ့နည်းပညာလောကကြီး တိုးတက်ဖို့အတွက် ၀ိုင်းဝန်းကြိုးစားနေကြတဲ့သူတွေအားလုံးကို လေးစားပါတယ်ဗျာ။ ဂုဏ်လည်းယူပါတယ်။ ဒီထက်မက အများအကျိုးကို သယ်ပိုးနိုင်ကြပါစေ။